नेपाल आज | वर्तमान कम्युनिष्ट सरकार भ्रष्टाचारमा लिप्त!
वर्तमान कम्युनिष्ट सरकार भ्रष्टाचारमा लिप्त!
काठमाडाैँ – परम्परागत रूपमा देशकाे सबै तहमा भ्रष्टाचारले जरा गाडेकाे छ। याे नै कुशल राज्य बन्न नदिने हतियारकाे रूपमा रहेकाे छ। नेपाली जनतामा यस्तो बलियो विश्वास भइसकेकाे छ कि नेतृत्व तहले पारदर्शी र स्वच्छ काम नगरेसम्म भ्रष्टाचार कुनै पनि हालतमा न्युनीकरण हुँदैन्। वर्तमान सरकारले अधिकांश निकाय घोटाला बारे पूर्ण रूपमा जानकार छैन। अहिले सम्म सरकारले निर्मला पंतको बलात्कार र हत्याको बारेमा कुनै निष्कर्ष निकाल्न सकेकाे छैन।
त्यहाँ वित्तीय अपचलनकाे असंख्य घटनाहरू छन् जुन बाहिर आइसकेका पनि छन्, तर सरकारको तर्फबाट कुनै कारबाही भएकाे देखिदैन्। सबैभन्दा नराम्रो कुरा यो हो कि सरकारले आफ्ना प्रतिद्वन्द्वीहरुलाई उनीहरुको राजनीतिक लक्षित गर्ने लक्ष्यका साथ विभिन्न केसहरुमा दबाब दिन खोजिरहेको छ। त्यस्ता उद्देश्यका लागि राज्य मेशिनरी प्रयोग भ्रष्टाचार नै हो।
सबै भन्दा नराम्राे कुरा याे छ की सरकार राजनीतिक रूप से उनीहरूलाइ निशाना बनाउने उद्देश्यले विभिन्न मामलामाथि अाफ्नाे प्रतिद्वन्दीमाथि दबाव बनाउन काेशिस गरिरहेकाे छ। यस्ताे उद्देश्यकाे लागि राज्य मेशिनरीका उपयाेग भ्रष्टाचार ने हाे। त्यस्तै सरकारले भ्रष्टाचारका मुद्दाहरुमा अाफ्नाे मान्छेहरुलाई बचाउने र अरुलाई निशाना बनाउने तरिका पनि निन्दनीय छ र गम्भीर आत्मपरीक्षणको अवश्यकता रहेकाे छ। मुख्य रूपमा ठूलो घोटालामा प्रधानमन्त्रीका नजिकका आफन्तको संलग्नता देखिएकाे छ। देशमा यस्ता घाेटाला काण्डकाे भयानक अवस्था रहेकाे छ।
यस्तै हाे नेकपा सरकारका चोखा ठानिएका र सधैँ प्रधानमन्त्रीका विश्वास पात्र मानिएका गाेकुल बाँस्कोटाकाे कहानी। उनले सार्वजनिक भएको अडियोमा मन्त्री बाँस्कोटाले सेक्युरिटी प्रेस खरिद गर्दा कर्मचारीसँग कुरा नगर्न र आफैसँग कुरा गर्न आग्रह गरेको सुनिन्छ । मन्त्री बाँस्कोटाले २० देखि २७ अर्ब रुपैयाँमा सेक्युरिटी प्रेस स्थापनाको काम सक्न पाए हुन्थ्यो भन्ने आग्रह पनि गरेका छन् ।
२५ देखि २७ अर्ब रुपैयाँमा सक्न पाए ७० करोड रुपैयाँको हाराहारीमा कमिसन आउने एजेन्ट मिश्रले मन्त्रीलाई विश्वास दिलाएका छन् । मन्त्री र मिश्रको संवाद सुन्दा उनीहरु दुईको दोस्ती लामो रहेको अनुमान लगाउन सकिन्छ । बाँस्कोटालाई नजिकबाट चिन्नेहरु भन्छन्, उनी आफ्ना अन्तरङ्ग मित्रहरुसित मात्र मु.मु.... लाएर कुराकानी गर्छन् । यो संवादमा बाँस्कोटाले धेरैपल्ट नेपाली भाषाले अश्लिल ठानेको मु... शब्द प्रयोग गरेका छन् । बाँस्कोटा र मिश्रबीच भएको संवादको रेकर्ड मिश्र आफैँले पत्रकारलाई दिएर घुस काण्ड सार्वजनिक गरेका हुन् ।
यो काण्डले एकातिर नेपाललाई सेक्युरिटी प्रेस बेच्न स्वीस, जर्मन र फ्रेञ्च कम्पनीबीच भइरहेको अस्वस्थ र अनैतिक प्रतिस्पर्धाको उजागर गरेको छ भने अर्कातिर समृद्धिका नाममा नेकपा मन्त्रीहरु घुस र कमिसनमा कतिसम्म चुर्लुम्म डुब्दै गएका छन् भन्ने पनि छर्लङ्ग हुँदै गएको छ ।
यस्तै सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि कम्युनिष्टहरु सत्तामा पुगेपछि भ्रष्टाचारमा लिप्त हुने गरेको बताएका छन्। उनले सत्तामा नहुँदा क्रान्तिमा ठूलोठूलो त्याग गर्ने कम्युनिष्टहरु सत्तामा पुगेपछि भ्रष्टाचारमा लिप्त हुनाले सरकार सञ्चालनमा समस्या स्वीकारेका छन्।
उनले कम्युनिष्टहरु सत्तामा पुगेपछि आफ्नो आदर्शबाट विचलित हुने गरेको विश्व इतिहास नै रहेको भन्दै नेपालमा घटेका पछिल्ला घटनाहरुले राम्रो संकेत नदेखिएको समेत बताए।